WARARKA BARAAWEPOST isniin 21JANUARY 2008
Mooryaanta Cadeeysatay isbaarada ay u dhigtaan Ummada Somaliyeed, ma ogola Ciidamo Caalami ah.
Dhamaan Somalida Xalaasha jecel waxay doonayaan in Somalia la keeno Ciidamada Golaha Amaanka ka socda, si ay u badbaadiyaan inta hartay Ummada Somaliyeed.
Ummada Somaliyeed waxay mudo dheer ku soo jirtay dhibaatooyin aan la soo koobi karin oo kala nooc,nooc ah. Dil, Isbaaro, Boob, Kufsiga Haweenka, Cadaalad la,aan Boob Deegaan aan xaq loo lahayn iyo dhibaatooyin kale oo aan la soo koobi karin, ayey mudo dheer qabaan Ummada Somaliyeed.
Qofka Somaliga ah ee wali ay nafta xun ku jirto ee Somaliya jooga, wuxuu habeen & dharaarba ku jiraa walwal noloshiisa qayb ka noqotay. Waayo wuxuu ka walwalaa goormay xabadu kugu dhici, maxaad cuntaa, xageed ka shaqeeysataa oo aad wax aad ku noolaato ka heshaa iyo waxyaalo kale oo la mid ah.
Arimahaasi aan kor ku soo xusay dhamaantoodna waa wada run xaqiiqo ah. Marka Qoom ama Ummad ay arimahaan oo kale ay ku habsadaan, waxaa loo baahanyahay in Gurmad balaaran oo Caalami ah loo soo Gurmado.Si looga kala badbaadiyo dhibaatooyinkaasi aan soo sheegay ee tirada badan.
Sidaas darteed anaga oo ku hadleeyna magaca Ururka Nabada Horumarinta Somaliyeed, UNHS iyo magaca Shabacabka Somaliyeed ee Dulman ee Nabada iyo Horumarka jecel, waxaan Caalamka Nabada jecel ee Nabada ku nool si naxariis leh oga codsaneeynaa, in ay si dagdag ku jirto oogu soo Gurmadaan Caruurta, hooyooyinka, Waayeelada iyo Abayaasha Somaliyeed ee dhamaantood ku jira dhibaatooyinka badan ee aan soo sheegay.
Golaha Amaanka waa in uusan iska indhatirin wax ka qabashada dhibaatada mudada dheer ku habsatay Shacabka Somaliyeed.Golaha Amaanka wuxuu magacaasi la yiraahdo Golaha Amaanka kula Baxay, waa in uu hadii wadan Aduunka ka tirsan ku dhacdo Amaan daro sidaan oo kale ah waa in uu wax ka qabto.
Isagoo ka duulayo Amaan darida ka timid meeshaasi amaankana ilaaliyo. Hadii Golaha Amaanka uu shaqadii loo abuuray gudan waayo ma istaahili doono in uu magacaasi aanu oogu yeerno.Waxaan Golaha Amaanka u sheegeynaa ama ka codsaneeynaa in ay la soo xiriiraan Ururka UNHS si aan u siino xogta ay ooga baahanyihiin dalka Somaliya dhamaantii.
Golaha Amaanka waxaan ka codsaneeynaa, in aysan wax talo ah ka weeydinin kuwii ka wakiilka ahaa dhamaan, dhibaatada ku dhacday Ummada Somaliyeed ee xooga ku haysta Gobolo ayan Deegaan u lahayn.Golaha Amaanka ma aha in ay arimaha Somaliya wax ka weydiiyaan Mooryaantii Ummada Qoriga caaradii ku haysata ee dhiiga Shacabka iyo maalkoodaba baneeystay ama xalaaleeystay mudada dheer.
By, Mohamed Omar Osman
Charman of UNHS